Mustaqbalka Danab kadib bixitaanka Ciidamada Mareykanka - Warbixin | KEYDMEDIA ONLINE
Mustaqbalka Danab kadib bixitaanka Ciidamada Mareykanka - Warbixin
Guutada Danab waa Ciidan aad u tababaran oo ka tirsan xoogga dalka, waana unuga ugu firfircoon kumandooska Soomaaliya, oo fuliya howlgallada gaarka ah.
MUQDISHO, Soomaaliya - Danab waa Ciidan loo tababaray hawlgalada gaarka ah ee ka dhanka ah Al-Shabaab, waxaana maalgeliya oo dhisay Mareykanka. Danab oo Af-Soomaali ahaan macnihiisu yahay "Iftiin" ayaa la aasaasay 2013.
Waxaa lagu billaabay 150 askari, waxay hadda maraysaa tiradooda 800 ilaa 1,000 askari. Taliska Mareykanka ee Africa [AFRICOM] ayaa rajeynaya in la gaarsiiyo 3,000, iyadoo lagu tababaro Danab saldhiga Beled-doogle, oo ku yaalla duleedka Wanlaweyn, gobolka Shabeellaha Hoose.
Danab ayaa lagu amaaney dagaalka lagula jiro Al-Shabaab oo guulo ka keeneen, waxayna tusaale u noqdeen sida ay tahay inay u ekaadaan Ciidamada qaranka, oo qabiil ku kala qeybsan, islamarkaana waxtarkooda difaaca dalka uu aad u yaryahay.
Hay'ad lagu magacaabo Bancroft Global Development, oo la shaqeysa Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa tababarka siisa Danab. Kadib tababbar sanado socday, oo ay la qaateen Ciidamada Mareykanka, Danab waxay hada awood u yeesheen inay howlgalo badankood si iskood ah u fuliyaan.
Waxaa laga cabsi qabaa in Danab ay joojiso howlgalladii lagu bartay, islamarkaana ay noqdaan Ciidan beeleed, kuna laabtaan degaanadii laga soo qoray askarta markii hore kadib bixitaanka Mareykanka.
Khubarada ayaa bixitaanka Mareykanka ka muujiyay walaac - gaar ahaan marka la fiiriyo in Soomaaliya aysan hadda diyaar u ahayn inay mas'uuliyadaha amniga kala wareegaan AMISOM oo 22,000 oo askari ka kooban marka la gaaro 2021.
Paul Williams, oo ah bare katirsan Jaamacadda George Washington, ma rumeysna in Danab iyo inta kale ee Ciidanka Qaranka Soomaaliyeed loo diyaarin karo mudo yar gudaheeda inay amniga guud ahaan dalka la wareegaan 2021-ka.
Mareykanka wuxuu muhiim u ahaa dagaalka Al-Shabaab, waxaana ka jooga Soomaaliya 6,000 illaa 7,000 oo askari, kuwaasoo la filayo in sanadka soo socda ay ka baxaan dalka. Lama oga Joe Bidan inuu bedeli doono go'aanka Trump, oo Ciidanka sii joogi doonaan.
IHal-ku-dhigga Danab waa "Isku Tiirsada", waxuu bixinayaa erayga ifafaallo wanaagsan, hadii hogaanka dalka ficil u bedelo weedhan. Balanwaadyadii uu sameeyay Farmaajo xiligii doorashadiisa waxaa kamid ahaa inuu dhisayo Ciidan qaran oo awood leh, lagana maarmi doono ku tiirsanaanta AMISOM. Wuxuu noqday balan-qaadkiisa hal bacaad lagu lisay.
AMISOM oo dalka joogta tan iyo 2007, Ciidanka dowladda iyo kuwa Mareykanka oo ku dhaw boqol kun oo askari, ayaa mudo 13 sano ah ka adkaan waayay Al-Shabaab, oo u dagaalamaya wiilal yaryar oo aan hub casri ah wadan, islamarkaana ka kooban tiradooda 5,000 illaa 7,000.
0 Comments Topics: africom al-shabaab danab soomaaliya